ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) को कार्यहरू सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
संक्षिप्त जीपीएस भनेको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम - अनुवादित: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आधिकारिक (लामो) नाम नेभिगेसनल स्याटेलाइट समय र रंगि - - ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वा छोटोका लागि NAVSTAR GPS हो।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- यो प्रविधि १ 1970 s० को दशकदेखि अमेरिकी रक्षा विभागले विकसित गरेको थियो।
-GPS आधिकारिक रूपमा १.17.07.1995.०XNUMX.१XNUMX मा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
- पूर्ववर्ती: युएस नेवीको NNSS (नेभिगेशन नेभिगेसन उपग्रह प्रणाली), पछि "ट्रान्जिट"
GPS विकल्पहरू: रूस, चीन, र यूरोपबाट ग्लोबल नेभिगेसन उपग्रह प्रणाली
-GLONASS रूसी उपग्रह नेटवर्क (कार्यरत) हो।
-बिदुउ चिनियाँ उपग्रह प्रणालीको नाम हो (विकास अन्तर्गत)।
-ग्यालिलियो डिसेम्बर २०१ in मा सुरू गरिएको ईयू उपग्रह प्रणालीको नाम हो।
एक जीपीएस ट्रैकर, बोलचालमा पनि GPS ट्र्याकि device उपकरण वा GPS ट्रान्समिटर भनिन्छ मात्र एक हातले तपाईंलाई बताउँछ, जहाँ GPS स्थान प्रणाली, एक व्यक्ति वा एक वाहन छ। तर कसरी जीपीएस ट्र्याकिंग काम गर्दछ? मलाई यसको लागि के चाहिन्छ? के यो जटिल छ? के मलाई यसको लागि कुनै सफ्टवेयर चाहिन्छ? हामी तपाईंलाई यो यसरी व्याख्या गर्छौं कि तपाईले गाडी र व्यक्ति पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
एक जीपीएस ट्रैकर किन यस्तो बहुमुखी र व्यावहारिक उपकरण हो भनेर बुझ्नको लागि, तपाइँले यो कसरी काम गर्दछ जान्नुपर्दछ। पहिले, एक तथाकथित जीपीएस संकेत आवश्यक छ, जुन पठाइएको छ। अब त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जुन सञ्चार हुन सक्छ: कि त उपग्रह वा सिम कार्डको साथ।
GPS ट्र्याकर के हो?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, GPS ट्र्याकर एउटा सानो सेल फोन हो, केवल प्रदर्शन बिना र कीबोर्ड बिना। साथै, ट्र्याकरमा अझै सानो जीपीएस चिप रहेको छ, किनकि तपाईसँग सम्भवतः तपाईको स्मार्टफोनमा एउटा छ। प्रायः यी जीपीएस ट्र्याकरहरू अझै सानो छन्, प्राय: माचबक्सको आकार मात्र।
स्थिति मलाई कसरी आउँछ?
धेरै सजीलो। तपाईंलाई पहिले सिम कार्ड चाहिन्छ, तर साधारण प्रीपेड कार्ड पर्याप्त छ। यदि तपाईंले अहिले सम्म सिम कार्डको निर्णय गर्नुभएन वा अझै खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो फिटिंग सिम कार्डमा हेर्नुहुन्छ। GPS ट्र्याकरले यसको स्थिति निर्धारण गर्न उपकरणमा GPS चिप प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि यसलाई हाम्रो नि: शुल्क GPS ट्र्याकिंग पोर्टलमा पठाउनुहोस्। यो मोबाइल फोन नेटवर्क मार्फत गरिन्छ। हाम्रो जीपीएस ट्र्याकिंग पोर्टलमा, यो डाटा त्यसपछि बचत गरिन्छ र तपाईं नक्शामा GPS ट्रान्समिटर देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं हाम्रो जस्तो GPS सर्वर प्रयोग गर्न चाहानु हुन्न भने तपाईं पनि उपकरण कल गर्न सक्नुहुनेछ वा एसएमएस पठाउन सक्नुहुनेछ र गुगलको लिंकमा एसएमएस द्वारा जवाफ दिनेछ। निस्सन्देह, हाम्रो जीपीएस ट्र्याकिंग सफ्टवेयर यहाँ प्रत्येक पटक एसएमएस पठाउनु भन्दा धेरै सजिलो छ, किनकि यदि तपाईं हाम्रो ट्र्याकिंग पोर्टल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने जीपीएस ट्रान्समिटरको साथ लगातार संचार स्वचालित हुनेछ। तपाईले हाम्रो पोर्टलमा तपाईको प्रयोगकर्ता नामको साथ लग ईन गर्नु भन्दा बढि केहि गर्नुपर्दैन र तपाईले पहिले नै गाडी वा व्यक्तिको स्थान देख्नुहुनेछ।
कसरी एक जीपीएस सर्भर / ट्र्याकिंग पोर्टल काम गर्दछ?
तपाईको जीपीएस ट्रैकरले तपाईको स्थिति एसएमएस मार्फत पठाउन सक्छ वा मोबाइल नेटवर्क मार्फत हाम्रो जीपीएस सर्वरमा स्वचालित रूपमा। हाम्रो जीपीएस ट्र्याकिंग पोर्टलले यो डाटा प्राप्त गर्दछ, यसलाई मूल्या and्कन गर्दछ र यो डेटाबेसमा भण्डार गर्दछ। तर तपाई एक प्रयोगकर्ताको रूपमा यी सबै प्राविधिक पृष्ठभूमिहरूको साथ केही गर्नुपर्दैन किनकि तपाईं भर्खरै स्थान पोर्टल खोल्नुहोस्, तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईंको स्थान लाइभ तपाईंको कम्प्युटर स्क्रिन, तपाईंको ट्याब्लेट वा स्मार्टफोनमा छ।
एक तथाकथित ट्र्याकिंग पोर्टल केवल व्यक्तिको लागि मात्र नभई पशु ट्र्याकिंग वा सवारी ट्र्याकिंगको लागि पनि आवश्यक छ। यस्तो अनलाइन पोर्टल मार्फत, प्रयोगकर्ताले एकै पटकमा धेरै सुविधाहरूको आनन्द लिन्छ। पेरिफेरल डाटा, साथ साथै GPS ट्रयाकरको वर्तमान स्थिति, इष्टतम विचार गर्न सकिन्छ। प्राय: असंख्य रिपोर्टहरू र प्रकार्यहरू उपलब्ध छन् जुन इष्टतम र सही मार्ग ट्र्याकिंगलाई अनुमति दिन्छ। उही तरीकामा सेवा जीवन र यात्रा समयहरूको बारेमा जानकारी प्रकट हुन्छन्। जब एक निश्चित क्षेत्र छोडिन्छ, एक अलार्म खोल्न सकिन्छ। स data्कलन गरिएको डेटा यी पोर्टलमा इष्टतम सारांश छ। पोर्टलमा, ट्र्याकर कन्फिगर गर्न सम्भव छ, जुन टाढा टाढाबाट कार्य गर्दछ। यसलाई व्यवसायिक रूपमा प्रबन्ध गर्नका लागि एक उचित कार्यक्रम प्रयोग गर्नुपर्दछ।
GPS ट्र्याकर: तिनीहरू यसको लागि उपयुक्त छन्
र सबैभन्दा पहिला, GPS रिसीभरहरू प्रयोगकर्ताको स्थिति निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि स्मार्टफोनको लागि नक्शा अनुप्रयोगको रूपमा। केहि अनुप्रयोगहरू खास उद्देश्यका लागि अनुकूलित छन्, जस्तै माउन्टेन बाइकि। वा हाईकिंग।
अर्को उद्देश्य वस्तु वा घरपालुवा जनावरको स्थिति निर्धारण हो। पहिलेको बढ्दो लोकप्रिय शौक "जियोचिंग" मा प्रयोग गरीन्छ, जीपीएस मार्फत खजानाको एक प्रकार। दोस्रो केस मुख्यत: कुकुर मालिकहरूलाई चासो दिने छ जो आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग बाहिर यात्रा गर्न रुचाउँदछन्, जहाँ उसलाई कहिलेकाँही पछाडि छोड्छ। एक GPS कुकुर कलरको साथ, मालिकले कुनै पनि समयमा आफ्नो कुकुर पत्ता लगाउन सक्छ, यो दृष्टि र प्रतिष्ठा बाहिर छ भने पनि।
गतिलाई दुई निश्चित समयमा वस्तुको स्थिति पत्ता लगाएर र दुई पटकको बीचमा यसको दूरी नापेर पनि मापन गर्न सकिन्छ। यो कार नेभिगेसन उपकरणहरू द्वारा गरिएको हो, जुन तपाईंलाई प्रदर्शनमा प्रति घण्टा किलोमिटरमा गति पनि देखाउँदछ। सामान्य रूपमा, अधिक उपग्रह वा रेडियो स्टेशनहरू, तपाईंको स्थिति बढि सही।
एक जीपीएस ट्रैकर अक्सर एक दिशा खोजक, ट्र्याकिंग उपकरण, बीगल वा ट्रैकरको रूपमा पनि बुझिन्छ। तपाईको एथलेटिक प्रदर्शन मात्र यो दौड वा दौड वा दौरे राम्रो दस्तावेज र पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर उपकरण अधिक छ। त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ जीपीएस मोनिटरिंग द्वारा सामान्य सुरक्षा सुधार गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि अभिभावकहरु चिन्तित छन् कि आफ्ना बच्चाहरु स्कूलमा राम्रो आएका छन्, एक जीपीएस ट्रैकर विशेष गरी सिफारिस गरीन्छ। हो, यो घरको तरीकामा पनि लागू हुन्छ। आपतकालमा, डिमेंशिया रोगी छिटो फेला पार्न सकिन्छ। यदि दुर्घटनाहरू हुन्छन् वा छुट्टीमा मद्दतको लागि कल वा यात्रा आवश्यक छ भने, उपकरणले त्यति सुरक्षा प्रदान गर्दछ। कार, ​​मोटरसाइकल, साइकल र अन्य सवारी साधनहरूका लागि परिणामले आदर्श चोरी सुरक्षा हुन्छ। साथै, लगेज वा अन्य बहुमूल्य चीजहरू जीपीएस ट्रैकर र जीपीएस मोनिटरिंगको साथ सजिलैसँग पाउन सकिन्छ।
5267 कुल दृश्यहरू 13 हेराइ आज
कसरी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) कार्य गर्दछ ...